Archive du 20171019
Manjaka ny dahalo any Amparafaravola Miafina any an’ala ny mponina
Raha mbola variana amin’ny ady amin’ny pesta sy ny kajikajy politika eny anivon’ny antenimierandoholona sy ny antenimierampirenena ny eto an-drenivohitra dia miaina ao anatin’ny tebiteby sy ny fitaintainana lava ny Malagasy maro any ambanivolo sy ny faritra maro samihafa.
Ady amin’ny Pesta Niditra an-tsehatra ny Frantsay
Mbola mandravarava ny pesta, ary miitatra amina sehatra maro samihafa eto amin’ny firenena. Toa ny antontan’isa no voafehy, fa tsy ny pesta. Efa ny sehatra iraisam-pirenena no mandray an-tànana ny zava-misy.
Praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Mahay mangala-bato be, hoy ny antoko AME
Elaela no tsy nahenoana izany antoko Miombona ezaka na AME izany teo amin’ny tontolo politika eto Madagasikara. Taorian’ny fodiamandrin’ny filohan’ny antoko teo aloha, Clement Ravalison, dia naneho hevitra omaly ny filoha vaovao, Ramilina.
Ady tany eny Ambohimamory Manohana ny tompon-tany ireo mpilalao baolina
Tsy mazava ny fihetsiky ny lehiben’ny fokontanin’Ambohimamory sy ny ben’ny tananan’Andranonahoatra, hoy ny mpisolovava ny tompon’ny ampahan-tany mitondra ny anarana hoe “La réunion” izay mirefy 9273 m2 etsy Ambohimamory.
BMH ISOTRY “Aoka hazava fa tsy mpangalatra faty izahay”
Niteraka fimenomenomana be teny anivon’ny fiaraha-monina tato ho ato ny mikasika ny fakan’ny BHM ireo razana eny anivon’ny hôpitaly voaporofo sy voamarina fa voan’ny pesta izay alevina avy hatrany eny Anjanahary fa tsy azon’ny fianakaviany entina.
Kaominina Antananarivo Hanatsara fa tsy hamotika ny “taxi”
Nihaona tao amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely omaly ny mpanao asa fitaterana amin’ny alalan’ny fiara karetsaka na “taxi” eto an-drenivohitra izay nahitana ny tompona fiara sy mpamily andaniny, ary ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), notarihin’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana ankilany.
Taksibrosy Fasan’ny Karana Nihena ny mpandeha noho ny Pesta
Mikasa ny hampitsahatra ny asa tanterahiny ireo mpitatitra ao amin’ny zotra nasionaly sy rezionaly etsy amin’ny toby fiantsonana Fasan’ny karana raha mbola mitohy hatrany ny fiparitahan’ny valan’aretina Pesta.
Blueline Business Tolotra miavaka ho an’ny orinasa
Raha tamin’ny alalan’ny orinasam-pifandraisana Bip, ny fampitana ireo karazana vata fahitalavitra misy any ivelany no tena nahafantaran’ny maro ny orinasa Blueline teo aloha teo dia fantatra fa efa manana ilay tolotra “Bleuline Business” ihany koa izy ireo ankehitriny.